स्थलगत रिपोर्ट : नेपालगञ्जमा धान्नै नसक्ने गरी बढ्यो कोरोना, अस्पतालको आँगनमै बिरामीको बेहाल
भारतको गोवाबाट नेपालगञ्जको जमुनाह नाकामा बिहान ७ बजे पुगेका हुन्, देवेन्द्र थापा । २७ वर्षे थापालाई कोरोना संक्रमण देखियो । भारतको गोवादेखि उनी कोरोनाबाट जोगिन भन्दै नेपाल त फर्किए । तर, यताको स्थिति पनि उनले सोचेजस्तो सुरक्षित भएन ।
‘भारतमा कोरोना लाग्छ भन्ने डरले नेपाल आएको हुँ’, जमुनाह नाकाको हेल्थ डेस्कमा एम्बुलेन्स पर्खिरहेका थापाले भने, ‘कोरोना त लागिहाल्यो । अब जोगिने चिन्ता भयो ।’
बिहान ७ बजे उनको कोरोना पुष्टि भइसकेको थियो । तर, मध्यान्ह १ बजेसम्म उनलाई लिन एम्बुलेन्स आइपुगेको थिएन । सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क सम्हालिरहेका जनस्वास्थ्यकर्मी चीरञ्जीवी ज्ञवाली एम्बुलेन्सकै अभाव भएको बताउँछन् । ‘एम्बुलेन्स बिहानै बोलाएका हौँ,’ उनले अप्ठेरो सुनाए, ‘महामारी यसरी फैलिएको छ कि सबैतिर एम्बुलेन्स ब्यस्त छन् ।’
पाँच जनाको परिवारका लागि आम्दानी गर्न उनी भारत गएको एक महिना मात्र भएको थियो । तर, भारतमा कोरोना संकट चुलिँदै गएपछि उनी ज्यान जोगाउन भन्दै नेपाल फर्किनुपर्‍यो । कमाउन गएका उनी कमाउनै नपाइकन फर्किए । त्यसैमाथि कोरोना संक्रमण भएपछि उनको तनाव दोब्बर भएको छ ।
‘भाइ आँखा देख्दैन । बा, आमा बुढा भइसके । छोरी सानै छे,’ उनले खोक्दै सुनाए, ‘साथीभाइसँग ऋण मागेर गाडी भाडा जोडेर आएको थिएँ । अब अस्पतालको पैसा कसरी तिर्नु ?’ अहिले उपचार खर्च संक्रमित आफैँले ब्यहोर्नुपर्छ ।'
एक साताका लागि लकडाउन भएपछि नेपाल–भारत जमुनाह नाका बन्द गरिएको छ । नाका बन्द भए पनि नेपाल फर्किने नेपालीहरूको संख्या भने दिनानुदिन बढ्दो छ । भारतमा कोरोना बढ्दै गएपछि बालबच्चा बोकेर नेपाल फर्किनेहरूको सीमानाकामा बाक्लै भिड छ ।
हुम्ला खार्पनाथ गाउँपालिकाका लोकबहादुर खडेरा र तण्डुप रावल भारतमा कोरोना बढेपछि भइरहेको जागिर छाडेर नेपाल फर्किए । ‘पहिलेजस्तो लकडाउन भयो भने त बर्बाद हुन्छ भनेर फर्क्या हौँ,’ रावलले भने । गत वर्षको लकडाउनमा भारतमै बिचल्लीमा परेका उनीहरू भारतको दिल्लीमा लकडाउन भएपछि भोकै मरिने डरले यसपटक भने बेलैमा स्वदेश फर्किएका हुन् ।
नेपालगञ्जमा यतिबेला तापक्रम जसरी उकालो लाग्दै छ, त्योभन्दा कठिन स्थिति स्वास्थ्य संकटले थपिदिएको छ । नयाँ वर्ष सुरु भएसंगै नेपालगञ्जले पुरानै कोरोना संकट नयाँ रूपमा भोग्नुपर्‍यो । २०७७ चैत सुरु हुञ्जेलसम्म नेपालगञ्जको माहौल सामान्य थियो । तर, चैतसँगै नेपालगञ्जमा कोरोना कहर सुरु भयो ।
कोरोना नियन्त्रण गर्न अहिले लकडाउन गरिएको छ । भारतसंग सीमा जोडिएको हुँदा कोरोना नियन्त्रणमा कठिनाइ झेलिरहेको छ, नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज क्षेत्रमा अहिले नेपाल–भारत नाकादेखि अस्पतालको ढोकामा अलपत्र परेका कोरोना संक्रमित भेटिन्छन् ।
अस्पतालको आँगनमै संक्रमितको बेहाल
बाँकेमा कोरोना अस्पताल भनेर तोकिएका भेरी अस्पताल र कोहलपुर शिक्षण अस्पतालका बेडहरू संक्रमितले भरिएका छन् ।
खजुराकी उमादेवी फुलामीले अस्पतालमा बेड पाउन एक दिन पर्खिनुपर्‍यो । उमादेवीको घरमा नौ जना छन्, सबै कोरोना संक्रमित । उनलाई लिएर बुहारी लक्ष्मीदेवी अस्पताल आएकी छिन् । ‘घरका सबैलाई नै कोरोना लाग्या छ,’ भेरी अस्पतालको कोरोना वार्डको ढोकामा पालो पर्खिरहेकी उनले भनिन, ‘सासूआमालाई हिजो साँझ नै सास फेर्न गाह्रो भएको हो । तर, रातभर कतै बेड पाइएन ।’
बाँके जिल्लाका सबै अस्पताल गुहार्दा पनि उनीहरूले बेड पाएनन् । ‘आमा त घरमै सिकिस्त भएर अस्पताल ल्याएका हौँ’, उनले गुनासो गरिन्, ‘यहाँ पनि भर्ना पाइएन भने त हामी मरे भैगो नि !’
लक्ष्मीकी जेठानी पनि एक सातादेखि भेरी अस्पतालको कोभिड वार्डमा जीवन र मृत्युको दोसाँधमा छिन् । ‘घरभरि सबै कोरोना लागेका मान्छे छौँ,’ लक्ष्मी भन्छिन्, ‘सबैलाई पालैपालो यसरी अस्पताल ल्याउनुपर्‍यो भने त के बाँचौँला र ?’
पीसीआर जाँच गरेर कोरोना देखिँदा पनि अस्पताल भरिभराउ भएकाले आफूहरूलाई घरै बस्नु भनिएको उनले बताइन् । ‘१० दिनअघि नै जाँच गर्‍या हौँ । त्यतिखेर केही हुँदैन घर जानुस् भन्यो । अहिले आएर दिदी र आमालाई च्याप्यो,’ उनले भनिन् ।
अस्पतालका चिकित्सक संकेत रिसालका अनुसार गम्भीर लक्षण भएका बिरामीलाई मात्र अस्पताल भर्ना गर्ने गरिएको छ । सामान्य लक्षण देखिने संक्रमितलाई सामान्य जाँच गरेर होम आइसोलेसनमा बस्न घर पठाउने गरिएको छ ।
यसरी घर पठाइएकाहरूबाट नै समुदायमा संक्रमण बढेको बताउँछन उनी । ‘गत वर्ष पोजिटिभ देखिएका सबैलाई आइसोलेसनमा राखिएको थियो । यस पटक भने अस्पताल भर्ना गर्नुपर्नेहरूलाई मात्र अस्पतालमा राखिएको छ, अरुलाई घर नै पठाइएको छ,’ डा. रिसालले भने, ‘यही कारणले पनि कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमै फैलिसकेको छ ।’ समुदायमा संक्रमण फैलिएसँगै भेरी अस्पतालमा रिक्सामा राखेर समेत संक्रमित ल्याउन थालिएको छ ।
अस्पतालले धान्न सकेन बिरामी
अस्पतालमा कोभिडका लागि भनेर १ सय ४० बेड राखिए पनि अहिले १ सय ६० जना बिरामी राखिएको छ । भर्ना गरिएका अधिकांश बिरामीलाई अक्सिजन दिनु परेको छ ।
बेड नपाएका संक्रमित मात्र होइन, अस्पताल परिसरमा पीसीआर जाँच गराउने लाइनमै पनि बिरामी ढलिरहेका देखिन्छन् । खजुराकै ४६ वर्षीय हरिबहादुर बुढाक्षत्री पीसीआर जाँच गराउने चिट हातमा बोकेर लाइनमा सुतेका छन् । घाँटी नै च्यातिने गरी खोकिरहेका उनी एक साताअघि मात्र भारतबाट आएका हुन् ।
बाँके मात्र होइन, बर्दियाबाट समेत पीसीआर जाँच गर्न भेरी अस्पताल आइपुगेका छन् मानिसहरू । बर्दियाको मैनापोखरीबाट पीसीआर जाँच गराउन आइपुगेकी लाटी थरुनी पनि उभिन नसकेर सडकमै पल्टिएकी छिन् ।
अस्पतालमा गम्भीर बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि अक्सिजनको पनि अभाव हुन थालेको छ । अर्कोतिर स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित हुन थालेपछि जनशक्ति पनि अभाव भएको छ । शुक्रबार मात्र भेरी अस्पतालका ३० जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि अस्पतालको ओपीडी सेवा र अन्य सेवासमेत प्रभावित भएको छ ।
भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धिताल संक्रमणको चाप अस्पतालको क्षमताभन्दा बाहिर गइसकेको बताउँछन् । ‘अवस्था हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसक्यो,’ उनले भने, ‘नेपालगञ्जमा भएका सबै अस्पताल कोभिड अस्पतालमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । भेरी अस्पतालले मात्र धान्न सक्दैन ।’
अस्पतालले अक्सिजन खरिदका लागि दैनिक ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । डा. रिसालका अनुसार, सामान्यतः अहिले दैनिक ३ सय सिलिण्डरसम्म अक्सिजन खपत हुन्छ । गएराति विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएर अक्सिजन अभाव भएको थियो । अहिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि अक्सिजन खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
अवस्था नियन्त्रणमा लिनका लागि गत वर्षजस्तै कोरोना संक्रमितलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने बताउँछन्, डा. रिसाल । उनी भन्छन, ‘लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई घर पठाउँदा समस्या भयो । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले समन्वय गरेर लक्षण नदेखिएका व्यक्तिलाई पनि अनिवार्य आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
गतवर्ष स्थानीय तह र संघीय सरकारको समन्वयमा अस्पताल भर्ना गर्नु नपर्ने संक्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको थियो । ‘यहाँ सेना, पुलिसका अस्पताल छन्, नर्सिङ होमहरू छन्, तिनलाई पनि कोभिड अस्पताल बनाउनुपर्छ । भेरी अस्पताल एक्लैले मात्र त अब धान्न सक्दैन,’ डा. रिसालले भने ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १०, २०७८, १८:०७:००